पुरा हुँदै सचिन परियारको पढ्ने सपना : ईन्दे्रणीले १२ कक्षासम्म निशुल्क पढाउने ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पुरा हुँदै सचिन परियारको पढ्ने सपना : ईन्दे्रणीले १२ कक्षासम्म निशुल्क पढाउने !
गुल्मीका पत्रकारहरुको सक्रियतामा काठमाण्डौसम्म पुगेका उनको शनिवार मात्रै गीत पनि सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतलाई दर्शक श्रोताले निकै रुचाएका छन् । पत्रकार मोहन बस्नेत, जीवन पाण्डेय, दिपक नेपाली लगायतले उनलाई काठमाण्डौ पुर्याएका थिए । उनले ईन्द्रेणीमा पनि आफ्नो कला देखाईसकेका छन् । कलाले बालक उमेरै परिपक्व उनको आर्थिक अवस्था देखेर अब ईन्द्रेणी समुहले उनलाई पढाउने भएको छ ।
चितवनको माडीमा माओवादीको अग्रता
छोरो चाहिन्छ कि पैसा ? भन्दै आमाबुबालाई यस्तो धम्की,जि बबलाई झन कमजोर बनाए भन्दै आमाबुबा रु दै मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)
चुनाव प्रचारमा हिँडेको गाडीबाट खसेर १८ वर्षीय युवाले गुमाए ज्यान
मन्त्रालयमा भित्रै ठूलो आवाजमा टिकटक बनाउदै